Oduu Archives - Page 3 of 146 - OMN
Yuuniversiitii Wallaggatti barattoonni Oromoo heeyyamni MIDROC GOLD’f haaromfame addaan cituu qaba jechuun mormii dhageessisan.
OMN: Caamsaa- 01/2018 Dhaabbanni MIDROC GOLD Laga-Danbii kan godina Gujiitti argamu Waggoota 20’f hawaasa naannichaa irratti miidhaa jabduu dhaqqabsiisaa tureera. Heeyyamni hojii...
Godina Jimmaa Aanaa Limmuu saqqatti Konkolaataan Buna seeraan ala fe’ee imalaa ture lubbuu dargaggoo tokkoo galaafachuun himame.
OMN-Caamsaa- 01/2018 Godina Jimmaa Aanaa Limmuu Saqqaa Ganda Carii Algaatti, konkolaataan Buna kontorobaandii fe’ee halkaan sa’aa 7:00’tti ummata baqatee fiigu, Qeerroowwan karaa...
Mormiin hawaasaa haarayoomuu heeyyama MIDROC GOLD Laga-danbiitiin wal qabatee guyyaa kaleessaa eegale har’as cimee itti fufeera.
OMN:Caamsaa – 01/2018 Hayyamni Albuuda Warqee Laga-danbii Dhaabbata MIDROC GOLD, Waggoota 10’f kan haaromfameef ta’uun mirkanaa’eera. Hayyamni kun haaromfamuun wal qabatee ammoo...
Harargee lixaa magaalaa Cirotti hidhaa fi dararaan humnoota Komaandi poostiin hawaasa irratti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufeera jedhu jiraattonni.
OMN:Ebla- 30/2018 Humnoonni Komaand poostii hawaasa nagayaa hiraarsuu fi dargaggoota ukkaamsuu cimsanii itti fufanii jiru. Godina Harargee lixaa magaalaa Cirootti labsii yeroo...
Barattoonni Yuuniversiitii Dillaa guyyaa har’aa hiriira mormii gaggeessan.kaayyoon hiriira kanaa barattoonni Oromoo waggaa lamaa oliif mooraa kanaa qabamanii mana hidhatti hiraarfamaa jiran akka gad lakkifaman gaafachuuf jedhan barattoonni OMN’f yaada kennan.
OMN:Ebla- 30/4/2018 Barattoonni Oromoo Yuuniversiitii Diillaa guyyaa har’aa sagalee mormii dhageeysisan. Hiriira Sa’aatii lamaa hanga Afuriirritti gaggeeyfame kanaanis gaafiilee gara garaa...
Hidhaa fi dararaa humnoota Komaandi-poostiin hawaasa irratti raawwatamu hifachuun jiraattonni Godina Harargee bahaa Aanaa Gaara-Mullataa magaalaa Gurawaa hiriira mormii gaggeessan.
OMN:Ebla- 30/2018 Godina Harargee bahaa Aanaa Gaara Mul’ataa magaalaa Gurawaatti halkan edaa hiriirri mormii guddaan jiraattootaan gaggeeffamee jiraachuu maddeen addeessan. Hiriiricharratti jiraattoonni...
Haarayoomuu heeyyama Dhaabbata MEDROC GOLD MINE kan Godina Gujiitti argamuun wal qabatee mormiin hawaasa naannichaatiin guyyaa har’aa gaggeeffamaa ooleera.
OMN:Ebla -30/2018 Godina Gujii bahaa Aanaalee Adoolaa, Gooroo-doolaa(Harqalloo) Shaakisoo magaalaa Haya Diimaa fi magaalota naannawa sanii kanneen biroo keessatti hiriirri mormii guyyaa...
Bulchiinsa Naannoo Somaaletti mormiin sirna abbaa irree Wayyaanee fi Abdii illee irratti hawaasaan gaggeeffamaa jiru cimee itti fufeera.
OMN:Ebla-28/2018 Mormiin ummataa Bulchiinsa Naannoo Somaalee magaalaa Shiniilee keessati eegale gara magaalota naannichaa biratti babal’ate. Bulchiinsa Naannoo Somaalee Itiyoophiyaa magaalaa Shiniilee keessatti...
OMN:Ebla – 28/2018 Muummichi Ministeera Itiyoophiyaa Dr.Abiy Ahimed, daawwannaaf guyyaa har’aa gara Jibuutii imaluun gabaafame. Erga angootti dhufanii as Dr.Abiy’n imala isaanii...
Dhabbanni MEDROC GOLD jedhamu kan waggoota 20’f hawaasa naannichaa irraan rakkoo jajjabduu geessisaa ture ammas marroo lammaffaaf heeyyamni isaa haaromfamuun qeeqa guddaa hawaasaan dhaqqabsiiseera.
OMN:Ebla- 28/2018 Godina Gujiitti yeroo lammaffaaf waa’een hayyama Haaromsa dhaabbata MIDROC komii jabaa jiraattota lafa Dambii fi ummata Oromoo bal’aan hordofsiisaa jira....
Godina Baalee Aanaa Madda walaabutti daandii konkolaataa haaromsa dhabuun riqichi baroota dheeraaf tajaajilaa ture jiguun jiraattonni rakkoo keessa jirra jedhan.
OMN:Ebla-26/2018 Godina Baalee aanaa Madda Walaabutti daandiin godina Gujii fi aanaa Madda Walaabuu qaxxaamuree aanaa Dalloo Mannaa fi gara magaalaa Roobee geessu...
Yuuniversiitii Ambotti barattoota hiriira bahuun karaa nagayaatiin gaaffii mirgaa gaafachaa turan irratti humnoonni mootummaa dhukaasa banuun barattoota doorsisaa akka turan gabaafameera.
OMN:Ebla-26/2018 Yuuniversitii Ambotti guyyaa hardhaa mormiin barattootaa bifa haaraan eegaluu maddeen OMN’tti himan. Hiriira mormii guyyaa hardhaa kanaan, barattoonni Yuuniversitichaa barsiisotnii fi...
Muummichi Ministeeraa Itiyoophiyaa Dr.Abiy Ahimed imala daawwannaaf gara Naannolee biyyattitti gaggeessaa jiraniin guyyaa har’aa magaalaa Hawaasaa seenaniiru.
OMN:Ebla – 26/2018 Muummichi Ministeera Itiyoophiyaa Dr.Abiy Ahimed daawwannaa hojiitiif imala gara Naannolee biyyattiitti taasisaa jiran itti fufaniiru. Guyyaa har’aa Ebla 26/2018...
Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanitti,Kommishinarri Olaanaan Komishiinii mirga Namoomaa Itiyoophiyatti qaamoolee gara garaa wajjiin marii gaggeessaa jiru.
OMN:Ebla-26/2018 Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti Komishiinerri Olaanaan Komishinii mirga Namoomaa, Zayid Ra’aad Al-Hussein tibbana Itiyoophiyaa daawwachuu irratti argamu. Komishiinerichi daawwannaa Itiyoophiyaatti taasisaa jiraniin,...